Italy 2-0 Spain: Azzurri Oo Si Buuxda Uga Aargudatay Spain Iskana Xaadirisay Wareega 8da Euro 2016. | Haqabtire News
Italy 2-0 Spain: Azzurri Oo Si Buuxda Uga Aargudatay Spain Iskana Xaadirisay Wareega 8da Euro 2016.
Xulka Talyaaniga ayaa si buuxda uga aargutay Spain ka dib markii ay 2-0 ku garaaceen islamarkaana ay ka reebeen tartanka Euro 2016 iyadoo xulka Azzurri ay iska xaadiriyeen wareega sideed dhamaadka oo ay la ciyaarayaan xulka Jarmalka
Spain ayaa De Gea badbaadiyay qeybtii hore iyadoo Talyaaniga ay ciyaarta hurdo u diri lahaayeen waqti hore, fursado goolal loo fishay ayuu ka beeniyay goolhayaha Manchester United xulka Talyaaniga, laakiin waxaa ugu danbeyn shabaqa ka soo taabtay daqiiqadii 33aad daafaca Giorgio Chiellini.
DAQIIQADII 33aad GOOOL!!! Eder ayaa laad xor ah oo xoogan soo dhaafiyay darbigii xiranayay laakiin De Gea ayaa soo bixiyay, Giaccherini ayaa falcelintii ugu horeysay balse Cheillini ayaa fursad u helay inuu kubada ku taabto shabaqa faaruq ah.
Italy ayaa Spain ka dhigtay xul uu ka lumay sida loo ciyaaro, waxa ay waayeen fursad ay kubada isagu dhiibaan, waxaana ugu wacneyd shax ciyaareedka tababare Antonio Conte ee 3-5-2, iyadoo xulka Talyaaniga ay u muuqdeen kuwa degdegsiimo ku ciyaaraya islamarkaan raacashadooda ay aheyd mid sarre mar walba oo ay kubada waayaan.
Qeybtii hore ayay ciyaarta noqon laheyd mid lagu kala baxo laakiin goolhayaha Manchester United David de Gea ayay Spain uga mahadcelineysaa in lagu kala nastay 1-0 oo ay Azzurri hogaanka ciyaarta ku hayeen.
Italy ayaa meesheeda ka sii waday ciyaarta wacan qeybtii labaad, fursad loo fishay gool ayay heleen daqiiqadii 56aad. Kubad uu soo qaaday Pelle ayaa keentay in Eder uu orod kaga baxsado Ramos, waxa uu kubada la kor tagay De Gea laakiin darbadiisa waxa ay beerka kaga dhacday goolhayaha Man United oo si fantastik ah u badbaadiyay.
Spain ayaa bedelo ay sameysay ka dib jaanta isla heshay bartamihii qeybta labaad, daqiiqadii 70aad Aduriz oo bedel ku soo galay ayaa ku soo dhawaaday inuu u barbareeyo La Roja laakiin darbadiisa waxa uu hareemariyay goolka. Sergio Ramos ayaa hadana kubad kooner oo la soo qaaday ku sigay kubad madax ah.
Qeybtii hore geesiga ciyaarta waxa uu ahaa De Gea, 20kii daqiiqo ee ugu danbeysay ciyaarta waxaa jagadaas la wareegay Gianluca Buffon, Vazquez ayaa kubad u dhigay Iniesta kaasoo kubad qatar ah u qaaday goolka Gigi Buffon ayaase ka beeniyay fursadaas.
Pique ayaa hadana kubad gantaal ah oo cagta bidix ah ka soo tuuray afka hore ee xerada ganaaxa laakiin waxaa mar kale u babac dhigay goolhaye Gigi Buffon. David Silva ayaa isna sigay goolka Buffon daqiiqadii 86aad.
Buffon ma yahay goolhayaha ugu fiican abid mise? Halyeeyga Talyaaniga ayaa xulkiiisa badbaadiyay daqiiqadii 90aad ee ciyaarta markii kubad la soo madaxeeyay uu goolka ku hor helay Gerard Pique laakiin Buffon ayaa ka beeniyay.
DAQIIQADII 90+1aad: GOOOOOOOL!!!!!!!!! Pelle ayaa ciyaarta hurdo u diray waqtigii dhimashada ciyaarta markii uu meel dhow ka toogtay shabaqa islamarkaana uu kubada dabamariyay goolhaye De Gea.
Ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 2-0 oo ay Italy ku dubatay xulka Spain, Talyaaniga waxa ay u soo baxeen wareega 8da iyagoo wajahaya Germany laakiin Spain safarkoodii difaacashada koobka waxaa soo gabagabeysay xulka Azzurri.